နော်ဝေနိုင်ငံပိုင်Statkraft ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး -XXIV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » နော်ဝေနိုင်ငံပိုင်Statkraft ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး -XXIV
Posted by Kyaemon on Nov 18, 2012 in Business & Economics, Education, Know-How, DIY, Photography, Sciences & Resources, Style & Beauty, Think Different, Travel |2comments
Hydropower Norway Dams
Vieddekke နဲ့ Statkraft အဖွဲ့တွေအကြောင်းကိုရေးခဲ့ပြီးပါပြီ၊
နှစ်ဖွဲ့စလုံးကနော်ဝေ က ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးတွေပါ၊
Vieddekke ကို အရပ်သားတွေကပိုင်ပြီး
ခုတင်မှာက ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ခါနီးက Statkraft သတင်းပါ၊
US Secretary of Energy to visit Statkraft
ယူအက်စ် စွမ်းအားဝန်ကြီးSteven Chu စတီဗင်ချူး ကStatkraft ကိုအလည်အပတ်လာမယ် (၂၀၀၉ ကသတင်း)
Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
ရဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ် စက်ရုံ ကြီး
Steven Chu will visit Norway in connection with the Nobel Peace Prize ceremony. He will use the opportunity to visit two of Statkraft’s largest power plants.
Ulla Forre (ရေကာတာ) စက်ရုံမန်နေဂျာBjorn Sandvik က ယူအက်စ် စွမ်းအားဝန်ကြီးSteven Chu စတီဗင်ချူး ကိုဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုပါကြောင်း၊
“Its alwaysapleasure to receive prominent guests, and we look forward to showing the US Secretary of Energy clean and renewable hydropower production here at the Ulla-Førre plant,” says power plant manager Bjørn Sandvik.
လေ့လာစရာ သင်ခဏ်းစာ ရစရာ အများကြီး ပါ
နော်ဝေရေနံနဲ့စွမ်းအားဝန်ကြီးTerje Rils-Johansen က ယူအက်စ် စွမ်းအားဝန်ကြီးSteven Chu စတီဗင်ချူး ကိုဆောင်းရာသီဝင်စ တုန်းက လာလည်ဘို့ဘိတ်ခေါ်ခဲ့တာ
လာမဲ့ စနေ ဆိုရင် ဝန်ကြီးSteven Chu စတီဗင်ချူး က လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်Ulla Forre ရေကာတာကို
Steven Chu was invited to visit Norwegian power plants when he met with Minister of Petroleum and Energy Terje Riis-Johansen earlier this autumn. This coming Saturday those plans will become reality as Secretary Chu travels to the Ulla-Førre hydropower scheme.
The U.S. Secretary of Energy will visit Norway’s largest pumped-storage power station at Saurdal and the country’s largest power station measured in capacity, Kvilldal. Power plant manager Bjørn Sandvik believes Chu can learnalot.
နေရောင်ခြည် နဲ့လေအား မ ရ တဲ့အခါဆိုရင်၊လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်ဘို့ ရေအားကိုဘဲအားကိုးရတာ၊
ပုံသေကားချပ်မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးလိုက်လျော်ညီထွေ( ရေအားဘက်ကိုလဲ )ပြောင်းသုံးလို့ရတာလို့
“Ulla-Førre isafine example of flexible hydropower, and facilities such as this will facilitate the development of other renewable energy sources onagrand scale, such as wind and solar power. Hydropower hasaunique storage property and can easily be increased or decreased as needed. This means hydropower can be produced when there’s no wind or sun,” Sandvik says…..
ဝန်ကြီး ချူး Steven Chu က သိပ်ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီး၊
၁၉၉၇ တုန်းက ရူပဗေဒဘာသာမှာ Nobel ထူးချွန်ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့တာ၊
ကျောက်မီးသွေး ရေနံ စတဲ့Fossil Fuelsကိုလျော့သုံးပြီး
အနုမြူ နဲ့အခြား (ရေ၊ နေရောင်ခြည်နဲ့လေ)
သူက ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁ က စပြီး ယူအက်စ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး
Steven Chu isascientist and received the Nobel Price in physics in 1997. He is an alternative energy advocate, as well asasupporter of nuclear energy, and believes the consumption of fossil fuels must be reduced significantly. Chu has served as the U.S. Secretary of Energy since 21 January 2009.
နော်ဝေဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ယူအက်စ်ဝန်ကြီး ကိုStatkraft ရေကာတာလျှပ်စစ်စက်ရုံ နှစ်ရုံလိုက်ပြတာ
US Secretary of Energy tours power stations – Statkraft
၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄
စနေနေ့မှာဝန်ကြီးချူး က နော်ဝေ အနောက်ဘက်ကိုကြွရောက်ပြီးရေကာတာနဲ့
Statkraft ပိုင်Ulla Forre လျှပ်စစ်ထုတ်ရုံကို
Steven Chu visited Western Norway on Saturday, to learn more about Norwegian hydropower technology. The US Secretary of Energy, alsoaNobel laureate in physics, was impressed by Statkraft’s power plant at Ulla-Førre
ဝန်ကြီးချူးက အမေရိကန်ရဲ့ ရေးအားထုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို
Statkraft ရဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်Turbines တာဘိုင်တွေကြည့်ပြီး
လေထုမှထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအား Wind Power တင် မ ကပါ၊
The Secretary, who wants to double the US production of hydropower, was givenalesson on the alternatives to his homeland’s energy production, when he saw Statkraft’s turbines.
– I’m impressed by Norway. This has been very educational. The US policy on renewable energy is about more than wind power. The energy needs to be stored, and hydropower is the best method, Steven Chu concluded.
ဝန်ကြီးချူးနဲ့အဖွဲ့တို့ကရဟတ်ယဉ်နဲ့သာယာလှပတဲ့Ryfylke ဒေသသို့ရောက်လာ ကာ
နော်ဝေရဲ့အကြီးဆုံး Blasjo ဆည်ကိုလေ့လာပြီး၊
ဆည်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်Ulla Forre လျှပ်စစ်ထုတ်စက်ရုံကိုရောက်သွားတာ၊
မန်နေဂျာBjorn Sandvik ကကြိုဆိုပြီး
Saurdal စက်ရုံနဲ့လျှပ်စစ်ထုတ် Kvilldal စက်ရုံကိုလိုက်ပြတာ၊
Statkraft ရဲ့ Ulla Forre က အမေရိကန်စီမံကိန်းတွေနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်တာ၊
Steven Chu and his entourage was flown by helicoptre over the beautiful Ryfylke nature, and got to see Norway’s largest reservoir, Blåsjø. This is the reservoir that feeds the destination of the trip, the Ulla-Førre plant. Plant manager Bjørn Sandvik wished the Secretary welcome, and showed him Norway’s largest Pumped Storage Station in Saurdal, as well as the power station in Kvilldal.
The visit was arranged after Secretary Chu earlier this year said that he wanted to learn more about the use of hydropower in conjunction with other renewable energy sources. And Statkraft’s Pumped Storage Station representatechnology that suits the american plans.
– This isavery interesting technology, and it may play an important role in the future, Secretary Chu said to the press.
နော်ဝေစွမ်းအင်ဝန်ကြီးTerje Riis-Johansenက Ryfylkeနဲ့Mongstadစက်ရုံတွေကိုလိုက်ပြတာကိုမိမိ(Johansen)က ဝမ်းသာမိကြောင်း၊
ကမ်ဘာ့ရာသီနဲ့စွမ်းအင်ကိစ်စတွေမှာယူအက်စ် ကနော်ဝေ ရဲ့လုပ်ဖော်လုပ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်း၊
လေ့လာတာဟာ ကျနော်တို့(နော်ဝေ) အတွက်အရေးကြီးကြောင်း
နော်ဝေ ဝန်ကြီးက ပြောဆိုတာ၊
– An important visit
– Secretary Chu’s visit is very important for Norway and Norwegian energy policy, Riis-johansen says. The US isacentral partner on both climate and energy issues. It’s important to us that the american Secretary of Energy takes this time in Norway to learn more about our carbon capture and storage projects, as well as hydropower.
ယူအက်စ်က ၇၀ ဂိဂါဝက် စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာ၊ဒါဟာ
အနုမြူအားသုံးဓာတ်အားထုတ်စက်ရုံ ၇၀ သို့မဟုတ်
ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားထုတ်စက်ရုံ ၁၀၀ နဲ့ညီမျှနေတာ၊
ယူအက်စ်ကကမ်ဘာ့စွမ်းအားသုံးစွဲမှုရဲ့ ၂၀ % ကိုအသုံးပြုပြီး၊
လောင်စာ ၈၆ % က ရေနံ၊မီးသွေးနဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နဲ့ထုတ်လုပ်နေတာ၊
aနရောင်ခြည်သုံးတာ ကိုပိုကြိုက်တာလို့ ဝန်ကြီးချူးကပြောဆို၊
နည်းပညာက မ ရောက်လာသေးလို့hydropower
Steven Chu hasagood reason to visit Statkraft’s modern hydropower stations. The US hasahuge unexploited potential for hydropower production. According to the American Department of Energy, the country can produce 70 gigawatt, which is about the same as 70 nuclear power stations, or 100 coal fueled power stations.
If the US decides to go foralarge development of hydropower stations, this will haveagreat impact. The country is responsible for 20 per cent of the world’s energy use, and 86 per cent of the power comes from oil, coal and gas.
– We want to switch to renewable energy, and preferrably solar power, Secretary Chu says. – But the technology to capture solar power is not here yet, and that is why hydropower is so important.
Ulla-Førre – Wikipedia, the free encyclopedia
Ulla Forre က၂၁၀၀ MW ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊
တနှစ်ကို ဖျမ်းမျှ ၄.၄၅ TWh ထုတ်နိုင်တာပါ၊
ရေကာတာတွေက ပင်လယ်ထက် ၃၃၀၀ ပေ ( အထပ် ၂၇၅ လောက်) မြင့်တာ၊
MW Megawatt မီဂါဝက် က “တစ်သန်း” “ဝက်” (၁ နောက်က သုည ၆ လုံး)
TWh Terawatt တဲရာဝက် က “သန်း တစ် သန်း” “ဝက်” (၁ နောက်က သုည ၁၂ လုံး)
၁၉၈၇ ကဆောက်ပြီးတာဆိုလို့ ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊
အနားကBlasjoဆည်ကိုလူကဆောက်လုပ်တဲ့ဆည်ဖြစ်ပြီး ဆည်က ၃၂၆၂ စတုရန်း မိုင်(၂၀၈၇၆၈၀ ဧက)ကျယ်ဝန်းတာပါ၊
The Ulla-Førre plant
Ulla – Førre – Norges Kraftstabbur.
Statkraft ကဆောက်လုပ်တဲ့ ရေကာတာအချို့
The Alta Power Plant’s dam, by Sautso, is one of the tallest arched dams in Norway. The dam’s arched form and upper termination into the mountainside is quite an impressive construction. It isamassive, double-curvature arched dam. The crown of the dam is roughly four metres wide. From the top, one hasamagnificent view to the north down the canyon and southward of the elongated lake Virdnejàvri. From the base of the dam (at the bottom of the canyon) to crown of the dam it measures 110 meters.
Alta kraftstasjon ရေကာတာ
၁၉၈၂ မှ ၁၉၈၇ ထိ ၅ နှစ် ကြာအောင်ဆောက်လုပ်ရပြီး၊ သူလဲ ၂၅ နှစ် ရှိပြီ၊
Search results for alta dam
Skogfoss ဓာတ်အားစက်ရုံ ၁၉၆၂-၁၉၆၄ ကဆောက်တာ ၄၈ နှစ်ရှိပြီ
Skogfoss power-station ( )
[Detailed Map][Large-Scale Map]
power station, concrete, dam, functionalism, tower
Laos လားအိုးနိုင်ငံကTheun Hinboun ရေကာတာကို
ဆောက်လုပ်နေတာ က ၂၀၁၃ စတင်လည်ပတ်ဘို့ရည်ရွယ်တာ၊
Statkraft က ၂၀ %၊ လားအိုးElectricite du Laosက ၆၀ %၊ GMS Laos Co က ၂၀ % ပိုင်ကြတာ၊
ဓာတ်အား ၂၈၀ မီဂါဝက် ထုတ်လုပ်ကာ ၂၂၀ မီဂါဝက် ကိုနိုင်ငံခြားသို့ရောင်းချပြီး ၆၀ မီဂါဝက် ကိုပြည်တွင်းသုံးမှာ
Statkraft is engaged inasignificant number of development projects
Statkraft is engaged in substantial development projects, most of them outside of Norway. Our goal is that all projects should contribute to create value and be implemented inasocially and environmentally responsible and sustainable manner.
Follow-up of corporate responsibility
All project development in Statkraft is based on internationally recognised guidelines and standards, of which the International Finance Corporation’s (IFC) standards for sustainable behaviour playakey role. The IFC requirements have been implemented in Statkraft’s project management system. This ensures systematic assessment of how our corporate social responsibility is discharged through the project process. Statkraft also works to developastandardised methodology to secureasystematic evaluation of corporate responsibility thoughout the project process.
Below are presentations of two selected development projects with associated challenges and results relating to corporate responsibility.
Theun-Hinboun expansion project – Hydropower in Laos
Ownership: Statkraft 20%, Electricité du Laos 60%, GMS Lao Company 20%
Capacity: 280 MW (220 MW for export and 60 MW to local grids) –atotal of 500 MW with the existing plant
Development phase: Under construction, scheduled to start operation in January 2013
Statkraft က ဖီလိပိုင်နိုင်ငံNIA ပိုင်Magat ရေကာတာကိုဆောက်လုပ်ပေးတာ
Magat power plant | Flickr – Photo Sharing!
Statkraft ဆောက်လုပ်တဲ့ရေကာတာ Slideshowဆလိုဒ်ရှိုးပါ
Search results for norway dams
Statkraft ဆောက်လုပ်တဲ့ Bjolvo နော်ဝေ ရေကာတာ
Dam, Bjølvo | Flickr – Photo Sharing!
Kvilesteinsvatn dam | Flickr – Photo Sharing!
Reinsfors နော်ဝေ ရေကာတာ
Reinsfors dam | Flickr – Photo Sharing!
Flickr: Statkraft’s Photostream
Hydropower –aset on Flickr
Stoltenberg praised hydropower in Turkey – Statkraft
Turkey တူရကီနိုင်ငံKargi ရေကာတာကို
ယင်းနိုင်ငံမှာ ရေကာတာ ၃ လုံး ဆောက်ပေးနေတာ
Vieddekke လိုဘဲ ရေကာတာရဲ့အူတိုင်ကို နိုင်လွန်ကတ်တရာနဲ့ရောခင်းပြီးဆောက်တာ
The Storglomvatn dams (1999 SD)3min. – YouTube
Ned fra Storglomvannet – YouTube
အခြားနော်ဝေ NGI အဖွဲ့ က ဆောက်ပေးတာ
Storglomvatn နော်ဝေ ရေကာတာ
Dam expertise on four continents
In 2009 NGI was engaged in research and development and the design and construction of new dams, as well as in the safety evaluation, risk assessment and strengthening of dams, on four continents.
NGI’s expertise in dam engineering was in demand in Asia, Africa, Europe and North and South America in 2009. Review and safety evaluation for two masonry dams have been done in India and for one of Sweden’s large embankment dams. In China, NGI was engaged by the UNDP forareview of damages and lessons learned from the catastrophic Wenchuan earthquake in May 2008. The earthquake caused the death of 68 000 people, and destruction of buildings, roads and other infrastructure.
In Poland, NGI is engaged in the design and safety review of Europe’s largest tailings dam for the copper industry. And NGI is doingarisk analysis foraplanned 185 meter tailings dam for the gold industry in Romania. In Uganda, NGI is engaged in hydropower development on the upper reaches of the Nile by Lake Victoria.
The Norwegian innovative asphalt core design and construction is now being used foradam in Brazil, and the same method is considered used foranumber of new dams in the Amazon region. NGI is also engaged in the design ofanumber of new asphalt core dams in the Province of Québec, Canada.
နော်ဝေ က ကမ်ဘာသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ရောင်းချ တဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးကွက်
The power market – regjeringen.no
Norway Exports – Internasjonal markedsføring av norske eksportører
ဥရောပ တိုက် ရဲ့ “အစိမ်းရောင်” ဘက်ထာရီ
The Green Battery of Europe
Balancing renewable energy with Norwegian hydro power
Search results for hunderfossen
Search results for sognefjell
Norway –aset on Flickr
Solbergfoss 13. juni 2011 – YouTube
Solbergfoss 16 juni 2011 – YouTube
Solbergfoss, Askim – YouTube
150611-Solbergfoss.MOV – YouTube
The HydroElectric Power Station – YouTube
Uploaded by jackrjohanson on Jan 20, 2011
Solbergfoss kraftverk – YouTube
Uploaded by vasskrafta on Oct 26, 2010
Historia til Solbergfoss kraftverk ved Glomma i Askim kommune. Video: E-CO
Dams in Namsen river
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ပြင်းအားကြီး ငလျင် ထပ်လှုပ်
စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ 23 ရက် 2008 ခုနှစ် မျိုးကြီး သတင်း – မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
ရွှေလီ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ထိစပ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရင်ကျန်းခရိုင်တွင် ယမန်နေ့ညပိုင်းက ပြင်အားကြီး ငလျင် နှစ်ကြိမ် လှုပ်ခတ်သဖြင့် မြန်မာပြည်ဘက်က မြို့နယ်များလည်း ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရန်ကျန်းခရိုင် အနောက်မြောက်ဘက် ၁ဝ ကီလိုမီတာအကွာ၊ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၉ ဒဿမ ၉ ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉ရ ဒဿမ ၈ ဒီဂရီ၌ ဗဟိုပြုသည့် ရစ်ချတ်စကေး (ပြင်းအား) ၄ ဒဿမ ၉ သည် တရုတ်စံတော်ချိန် ည ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ်နှင့် ပြင်းအား ၅ ဒဿမ ၉ သည် ၈ နာရီ ၂၄ မိနစ်၌ လှုပ်ခတ်သဖြင့် ရင်ကျန်းနှင့် ၉၃ ကီလိုမီတာ ဝေးသော လိုင်ဇာ၊ ၁၂၈ ကီလိုမီတာ ဝေးသော ရွှေလီမြို့ အပါအဝင် မူဆယ်၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနားအထိပင် ရိုက်ခတ်သွားခဲ့သည်။
“မနေ့ညက ၇ နာရီလောက်မှာ လှုပ်သွားတာပဲ။ ပြင်းတယ်။ အိမ်တွေတောင် ခေါင်မိုးတွေက အသံမြည်လာတယ်။ “ဝုန်း” “ဝုန်း” ဆို ခဏပဲ။ သိပ်မကြာလိုက်ဘူး။ ညကတော့ သတိထားပြီး အိပ်ကြတာပေါ့။ ငလျင်ဆိုတာ အသွားအပြန် ရှိတယ်ဆိုတော့ ပြန်လာမယ်လို့ ထင်နေကြတာ သတိထားပြီး အိပ်ကြတယ်။ အပျက်အစီးတော့ မရှိဘူး” ဟု ဗန်းမော်ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
ရွှေလီနှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် မူဆယ်မြို့တွင်လည်း ငလျင်လှုပ်အပြီး ဒေသ အာဏာပိုင်များက အသံချဲ့စက်များဖြင့် ရပ်ကွက်များအတွင်း လှည့်ကာ ငလျင်ထပ်မံ လှုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လိုက်လံ သတိပေးကြောင်း မူဆယ် ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြန်မာနယ်စပ်မြို့များနှင့် အခြားဒေသများတွင် ယခု လှုပ်ခဲ့သည့်ငလျင်ကြောင့် လူသေဆုံးသည့်သတင်း မကြားရသော်လည်း ရင်ကျန်းမြို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၄ဝ ကွာဝေးသော လီဆူး လူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသ စုတင် (Sudian) မြို့ငယ်လေးတွင် လူ ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၅ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရကာ ၅၅ ဦးမှာ အနည်းအကျဉ်း ဒဏ်ရာရကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ QQ သတင်းဌာန က ဖော်ပြသည်။
လူပေါင်း ၈ သောင်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည့် စီချွမ်းပြည်နယ် ငလျင်ကပ်ဘေး နောက်ပိုင်း ယခုတကြိမ် နယ်စပ်တွင် ပြင်းအားကြီး ငလျင် လှုပ်ခတ်သွားသဖြင့် တရုတ်ပြည်သူများကြား စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေကြောင်း ရွှေလီဒေသခံ ရှမ်းလူမျိုးတဦးက ယခုလို ပြောပြသည်။
“မနေ့ညပိုင်းက ငလျင်လှုပ်တာ တော်တော်လေး ပြင်းတယ်။ ဓာတ်တိုင်တွေ ယိုင်သွားတယ်။ အိမ်တွေလည်း အသံတွေ မြည်လာတယ်။ ည ၁ နာရီမှာ ထပ်လှုပ်မယ်လို့ သတိပေးတယ်လေ။ ရွှေလီမှာ ဘယ်သူမှ အိမ်ထဲမှာ မအိပ်ကြတော့ဘူး။ လမ်းဘေးက မြက်ခင်းတွေမှာ ထွက်အိပ်တဲ့သူ အိပ်တယ်။ အပြင်မှာပဲ အကုန် ထွက်အိပ်ကြတယ်။ ဆေးရုံမှာဆိုရင်လည်း လူနာတွေကို အကုန် အပြင် ရွှေ့ထားကြတယ်။ ဒီနေ့မနက်အထိ ငလျင်အကြောင်းပဲ ပြောနေကြတာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ငလျင်ဗဟိုချက်နှင့် နီးကပ်နေသည့် ရင်ကျန်းမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးလှိုင်းများ ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြောင်း ရင်ကျန်းတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာတဦးကလည်း ယခုလို ပြောသည်။
“တော်တော်လေး ပြင်းတယ်။ ခေါင်းတွေကို မူးနောက်သွားတာပဲ။ အကုန်လုံး ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ အပြင် ထွက်ပြေးကြတယ်။ လမ်းဘေးက ဓာတ်တိုင်တွေ လဲကျတာတွေ ရှိတယ်။ တချို့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေလည်း ပြုတ်ကျကုန်တယ်။ ကျနော့်အခန်းက ဘုရားစင်ဆို ပြုတ်ထွက်သွားတာပဲ။ အဖွားကြီးတယောက် သေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဆေးရုံကိုလည်း ဒဏ်ရာရတဲ့ သူတွေ သွားကြတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ငလျင်ကြောင့် ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ မန်စီ၊ ပေါင်စန်း၊ တလီ၊ လင်ချန်းနှင့် ဖူအယ်မြို့ကြီးများတွင် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ခေတ္တခဏ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ မြေငလျင် သဘာဝကပ်ဘေး ကျရောက်နေသည့် ကျေးရွာ ၁၅ ရွာရှိပြီး အိမ်ခြေ ၂၇ဝဝ နှင့် လူဦးရေ ၁၄၂၄၂ ဦး ရှိကြောင်း တရုတ်အစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ ဒေသများသို့ တရုတ်အာဏာပိုင်များမှ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ စေလွှတ်ကာ မိုးကာ ရွက်ဖျင်တဲများ၊ ကုတင်များ၊ အဝတ်အထည်၊ စောင်များ၊ ဆန်နှင့် စားသောက်စရာများ ပေးဝေလျက် ရှိသည်။
ယခုလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင်လည်း တရုတ် စံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ရင်ကျန်းခရိုင်နှင့် ၁ဝ ကီလိုမီတာအကွာ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၅ ဒဿမ ၁ ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉ရ ဒဿမ ၉ ဒီဂရီတွင် ဗဟိုပြုကာ ပြင်းအား ၅ ရှိသည့် ငလျင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သေးသည်။
အင်အားပြင်း ငလျှင် လှုပ်လို့ 
အက်ကွဲ ယိုယွင်းမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့